Sida loo Play MKV on Mac OS X (Yosemite & Mavericks ka mid ah)
Sida loo Play MKV ee Mac OS X (El Capitan & Yosemte ka mid ah)
Qaar badan oo dadka isticmaala QuickTime kaliya ogaaday in aysan ciyaari karin MKV ama HD files MKV in ay Mac OS X (Yosemite & Mavericks ka mid ah). Waa maxay arrinta? QuickTime ciyaari karaa MKV faylasha? Dhab ahaantii, ciyaaryahanka QuickTime ma taageeri MKV ama HD MKV natively gudbiyo. Sidaas, ee ma suuroowdaa jid kasta oo suurtagal ah inuu ka ciyaaro file MKV la QuickTime? Dabcan waxaa jira. Marka laga reebo QuickTime, waxaa jira wax badan oo ka mid ah fursadaha inuu kaa caawiyo inaad ciyaari file MKV ah OS X Mac ah (El Capitan & Yosemite ka mid ah).
Si aad u ciyaaro file MKV ah ee Mac (El Capitan & Yosemite ka mid ah), waxaan u baahanahay inaan marka hore wax ku saabsan qaab MKV ka bartaan:
An MKV file waa, qaab weel free il furan ee ay Matroska. Waxaa qaban karto noocyo kala duwan oo tiro aan xad lahayn oo ah video, audio, sawirka ama kuwan raadkaygay Cinwaan in mid ka mid ah faylka. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in file ah .avi gudahood file .mkv ah ku jira. File MKV An aan la xiriira ciyaaryahanka kaliya sida QuickTime. Taasi waa sababta dadka inta badan ay dareemaan niyad marka ay isku dayaan in ay ciyaari file MKV ah ee QuickTime. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah xalka:
Xalka 1: Beddelaan MKV ee Mac OS X la Converter desktop video
Xalka 2: Beddelaan MKV ee Mac OS X leh video Converter online
Xalka 3: Play MKV la ciyaaryahan awood leh MKV u Mac - Wondershare Player
Xalka 4: Play QuickTime MKV - Ku rakib plugin Perian
Xalka 1: Beddelaan MKV ee Mac OS X (El Capitan & Yosemite ka mid ah)
Haddii aad qabto wax badan oo files MKV oo aad rabto inaad iyaga u ciyaaro ciyaartoy badan sida, iPhone iPad ama iPod, inaad si fiican u badalo lahaa MKV in ay qaabab kale sida MP4 ah, MOV, M4V ama iwm Halkan, waxaan ku talin doonaa ku Video Converter u Mac (Yosemite & Mavericks ka mid ahaa), taas oo aad awood u si loogu badalo MKV ah in kasta oo qaab video caan ah ciyaartoyda kala duwan, qalabka iyo codsiyada. Wixii QuickTime, aad u bedeli karaan MKV in ay file MOV ah in uu la xidhiidhaa QuickTime. Eeg talooyin dheeraad ah oo hoos ku qoran.
Tallaabo 1: Ku jiid files MKV eee interface ka.
Talaabada 2: Dooro qaab kasta ama aalad aad doonayso (format ama qalabka ugu caansan ayaa sidoo kale halkan taageeray).
Talaabada 3: Si fudud ku dhuftay Beddelaan rukun ee hoose-saxda ah ee ay interface.
Daawo video ah tutorial faahfaahsan:
Halkan waa hab sahlan. Looma baahna in la dajiyo barnaamij kasta. Isku day inaad ka soo hadda.
Xalka 3: Play MKV la ciyaaryahan awood leh MKV u Mac (Yosemite) - Wondershare Player
Haddii aadan jeclaan QuickTime, waxaad isticmaali kartaa ciyaaryahanka ugu awooda badan MKV Mac ​​leeyahay in ay bixiyaan; ka Wondershare Player . Waa codsiga lacag la'aan ah iyo user-friendly, ciyaaro kasta video file iyo qaab maqal ah madal kasta oo ay ka mid yihiin Windows iyo Mac. Kuwa jeclaan hal ciyaaryahan warbaahinta u dhan videos, Wondershare Player uu noqon doono gabi ahaanba doorashada. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay ku darayaa taageero files Cinwaan. Waxaad si toos ah ku dari kartaa subtitles in ay filim aan qoraalka. Waa arrin xoog badan, sax? Sidaas leeyihiin isku day ah!
Hel ciyaaryahan MKV ee Mac (Yosemite & Mavericks ka mid ah) halkan:
Xalka 4: Play QuickTime MKV - Ku rakib Perian plugin
Perian waa lacag la'aan, u furan il QuickTime qayb ka ah in uu ku daro taageero hooyo u badan oo ah qaabab video caanka ah sida MKV ah. Marka aad lahaa Perian lagu rakibay, aad qabtid in uu isaga tago QuickTime gabi ahaanba ka dibna waxaa la bilaabi. Ogsoonow in aanad ma ahan oo keliya la xiro Window QuickTime ah; dhab ahaantii, waxa uu weli socda ee asalka ah. Si tan loo sameeyo, QuickTime cusbooneysiin karo qaab iyo maktabadda Deji.
Fiiro gaar ah: Haddii plugin Perian oo aan shaqo haynin in aad libaax Mountain, waxaa jira workaround kale sooc. Fadlan isku day lagu kalsoonaan karo kale Perian on Mountain Libaaxa iyo kale Perian on Yosemite .
Sidee baan ku rakiban kartaa QuickTime 7 Waayo, Mountain Libaaxa?
> Resource > Mac > Sida loo Play MKV ee Mac OS X (Yosemite & Mavericks ka mid ah)